Akụkọ - Ihe osise nke ọma, mkpuchi mkpuchi electrostatic, mkpuchi Electrophoretic
Chains Link Round nke Ihe Eserese Dị Iche Iche, Kedụ ka ọ ga -esi mee ya?
Ihe osise nke ọma
Electrostatic Ịgba mkpuchi
SCIC-chain nọ na-eweta agbụ njikọ njikọta na elu elu dị iche iche, dị ka galvanization na -ekpo ọkụ, galvanization eletriki, eserese/mkpuchi, mmanụ, wdg. ma ọ bụ ọbụna ịchọ mma.
Site na obere akụkọ a, anyị na -elekwasị anya n'ụzọ dị iche iche eserese / mkpuchi maka ndị ahịa anyị.
Ụzọ atọ nke eserese na -ewu ewu na ndị ahịa anyị na ụdọ njikọ njikọ alloy steel gburugburu:
1. Nkịtị eserese
2. mkpuchi mkpuchi ihe ọkụ eletrik
3. mkpuchi electrophoretic
A maara eserese nkịtị maka ịdị ọnụ ahịa ya na njikwa ya dị mfe, mana obere mmetụta nrapado na njikọ njikọ njikọta ma e jiri ya tụnyere ụzọ abụọ ndị ọzọ; ya mere, ka anyị kwuo maka ụzọ mkpuchi abụọ ndị ọzọ.
Igwe mkpuchi ihe ọkụ eletrik
A na-ebu ntụ ntụ plastik site na ngwa eletriki dị elu. N'okpuru ọrụ nke ọkụ eletrik, a na -efesa mkpuchi ahụ n'elu njikọ njikọta, a ga -etinye ntụ ntụ ahụ n'elu njikọ njikọta iji mepụta mkpuchi ntụ ntụ. Mgbe etinyere mkpuchi ntụ ntụ na oke okpomoku wee mee ka ọ maa mma ma sie ike, irighiri plastik ahụ ga -agbaze n'ime mkpuchi mkpuchi ikpeazụ nwere mmetụta dị iche iche, wee na -arapara n'elu njikọ njikọ ahụ.
Enweghị ihe mgbaze dị mkpa, na usoro a enweghị mmetọ na gburugburu ebe obibi yana enweghị nsí na ahụ mmadụ; Ihe mkpuchi ahụ nwere ọmarịcha ọdịdị dị mma, nrapado siri ike na ike igwe; Oge ọgwụgwọ nke ịgba mmiri dị mkpụmkpụ; The corrosion eguzogide na -eyi na -eguzogide nke mkpuchi dị nnọọ elu; Enweghị primer a chọrọ.
Nhọrọ ndị ọzọ na agba na oke ọkpụrụkpụ. A naghị etinye mkpuchi mkpuchi ọ bụla. na mpaghara njikọ njikọ.
Ihe mkpuchi electrophoretic
A na -emikpu akụkụ yinye ahụ n'ime mmiri ịsa ahụ mkpuchi electrophoretic dị ala jupụtara na mmiri dị ka anode (ma ọ bụ cathode), na cathode (ma ọ bụ anode) dabara na ịsa ahụ. Mgbe ejikọsịrị oge dị n'etiti mkpanaka abụọ, edo edo na ihe nkiri mara mma nke mmiri anaghị agbaze na -etinye n'elu njikọ njikọta.
Ọ nwere njirimara nke mmetọ dị ala, ịchekwa ike, ịchekwa akụ, nchekwa na mgbochi mgbochi, mkpuchi dị larịị, ezigbo nguzogide mmiri na nguzogide kemịkal. Ọ dị mfe ịghọta igwe ọrụ na akpaaka nke ụlọ ọrụ mkpuchi. Ọ dabara maka mkpuchi nke ihe eji arụ ọrụ nwere ụdị mgbagwoju anya, akụkụ ya, akụkụ ya na oghere ya.
Nhọrọ agba dị obere (ọkachasị nke ojii) na obere ọkpụrụkpụ, mana yana nnukwu mkpuchi ọbụna n'elu njikọ njikọ 100%.
Ọtụtụ ndị ahịa anyị maara nke ọma ụdị eserese/ihe mkpuchi dị iche iche maka mkpa ha ga -egosi kpọmkwem ụzọ n'usoro ha.
Oge ezipụ: Apr-22-2021